NOAA na - enweta Ihe Igwe Igwe Akpa na GOES-16 Satellite | Network Meteorology
NOAA na-enweta ihe osise ọkụ latrik mbụ site na GOES-16 satịlaịtị
Ihe onyonyo a gosiri ụzarị ọkụ nke GLM weghaara n'otu elekere na February 14, 2017. Oyiyi - NOAA
Àmụ̀mà ndị ahụ sitere n'Earthwa ahụ dị egwu, mana ... ị nwere ike iche n'echiche inwe ike ịhụ ha site na mbara igwe? Ugbu a nrọ ahụ nwere ike mezuo, naanị na kama ịnọ n'ụgbọ mbara igwe, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ihe onyonyo ahụ n'ebughị ụzọ hapụ ụlọ maka Geostationary Lightning Mapper (GLM) nke na-abanye na satellite GOES-16 nke NOAA.
N'ihi ihe oyiyi ndị a, ndị na-ahụ maka ihu igwe ga-enwe ike ibu amụma n'ụzọ dị mfe karị ebe ọkụ na àmụmà ga-ada.
GLM bụ ngwa emere iji chọpụta oge na geometationary orbit nke na-ebunye data nke, rue ugbu a, enweghị ndị sayensị. Ihe eserese a na-achọ ihe ọ bụla na mpaghara Ọdịda Anyanwụ esswa n’akwụsịghị akwụsị, nke ga-enyere aka chọpụta ajọ ifufe.
Ọ bụrụ na e nwee oke mmiri ozuzo, data enwetara ga-egosi ma ebili mmiri ahụ na-efunahụ ike ma ọ bụ, na ntụle, na-abawanye. A ga - ejikọ data ndị a na data ndị ọzọ enwetara site na radar na satalaịtị ndị ọzọ, ọ ga - abụkwa ozi bara uru iji tụlee ihu igwe siri ike., na ịnye ọkwa na ọkwa iji nwekwuo oge n'ọdịnihu.
Ihe ngosi GLM a na-egosi àmụmà jikọtara ya na sistemụ nke mepụtara oke mmiri ozuzo na oke ifufe na Texas na February 14, 2017. Image - NOAA
GLM nwekwara ike ịchọpụta àmụ̀mà n'igwe ojii, nke na-ewekarị opekata mpe nkeji ise. Nke ahụ nwere ike ọ gaghị adị ka oge dị ogologo, mana ọ dị oke mkpa ịdọ ndị niile na-eme ihe n'èzí aka nke oke ifufe ahụ wee zere mmebi ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere satellite GOES-16, pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » NOAA na-enweta ihe osise ọkụ latrik mbụ site na GOES-16 satịlaịtị
Mmetụta nke Antarctica na ihu igwe ụwa